FAA: agbọelu Malaysia adịghị mma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » FAA: agbọelu Malaysia adịghị mma
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
FAA: Civil Aviation Authority nke Malaysia anaghị agbaso ụkpụrụ nchekwa mba ụwa
Ngalaba Transportgbọ njem na US Nchịkwa Federal Aviation (FAA) achọpụtala na Civil Aviation Authority nke Malaysia (CAAM) anaghị ezute Civiltù Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu International (ICAO) safetykpụrụ nchekwa ma wee nata ọkwa 2 nke na-adabere na nyochaghachi nke ikike ụgbọelu obodo.
Otu nyocha nke International Aviation Safety Assessment (IASA) pụtara na CAAM - ahụ nke yiri FAA maka ihe gbasara nchekwa ụgbọelu - ezughị oke n'otu ma ọ bụ karịa, dịka nka teknụzụ, ndị ọrụ a zụrụ azụ, idekọ ndekọ, na / ma ọ bụ nnyocha usoro.
Na 2003, e kenyere Malaysia akara ogo 1, nke pụtara CAAM gbasoro ụkpụrụ ICAO maka nlekọta nchekwa ụgbọelu. FAA mere nyocha nke mba dị na Malaysia n'okpuru usoro IASA na Eprel 2019, wee zute CAAM na July 2019 iji kpaa maka nsonaazụ ahụ.
Usoro a bụ nyocha nke CAAM ọ bụghị ụgbọelu ọ bụla na-arụ ọrụ n'ime ma ọ bụ n'èzí Malaysia. Site na nchịkọta Otu 2, ndị na-ebu Malaysia nwere ike ịga n'ihu ọrụ dị na United States. Ha agaghị ekwe ka ịmalite ọrụ ọhụrụ na United States.
Dịka akụkụ nke mmemme IASA, FAA na-enyocha ndị ọrụ ụgbọelu nke obodo niile nwere ndị na-ebu ụgbọ elu na-etinye aka na United States, na-eduzi arụmọrụ ugbu a na United States, ma ọ bụ soro na ndokwa ịmekọrịta koodu na ụgbọ elu ndị mmekọ US. na-emekwa ka ọha na eze mara ihe ọmụma ahụ. Nyocha ndị ahụ na-ekpebi ma ndị isi ụgbọ elu obodo ọzọ ga-ezute ụkpụrụ nchekwa ICAO, ọ bụghị iwu FAA.
Onu ogugu 1 putara na onye ikike obodo nke obodo na akwado iwu ICAO. N'iji akara 1 nke IASA, ndị na-ebu ụgbọ elu nke mba nwere ike ịmalite ọrụ na United States ma buru koodu nke ndị na-ebu US. Iji kwado ọkwa otu Atiya, mba ga-agbaso ụkpụrụ nchekwa nke ICAO, ụlọ ọrụ ndị ọrụ gọọmentị nke United Nations maka ụgbọelu na-ewepụta ụkpụrụ mba ụwa yana omume akwadoro maka arụmọrụ na ndozi ụgbọelu. A na-eziga ozi IASA na weebụsaịtị anyị.